सङ्क्रमितले खोक्दा वा हाछ्यूँ गर्दा निस्कने तरल पदार्थ तीन घण्टासम्म बाँच्छ !
सङ्क्रमितले खोक्दा वा हाछ्यूँ गर्दा निस्कने तरल पदार्थ तीन घण्टासम्म बाँच्छ !
काठमाडौं । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितले खोक्दा वा हाछ्यूँ गर्दा निस्कने तरल पदार्थ अर्थात एअरसोईल्डमा तीन घण्टासम्म बाँच्ने देखिएको छ ।
त्यो भाइरस कागजमा परेमा २४ घण्टा र प्लाष्टिक तथा स्टीलको सतहमा परेमा २–३ दिनसम्म बाँच्ने देखिएको न्यू इङ्गल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित अध्ययनको निष्कर्ष छ । अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार तामाको सतहमा भने यो भाइरस चार घण्टा मात्रै बाँच्न सक्ने देखिएको छ ।
के दोहोरिएर कोभिड–१९ लाग्न सक्छ ?